Folk Song Song: "Waxaan Ka Shaqeynayay Tareenka"
Muusikada Dib u eegis
Dabeecada sheekada "Waxaan ka shaqeynayay wadada tareenka"
Song Song ama Dib u Eegista Princeton?
" Waxaan ka shaqeynayay jidka tareenka " waxaa laga yaabaa inuu noqdo mid ka mid ah heesaha ugu fiican ee dadku ku saabsan yahay habka tareenka Maraykanka. Sheekadu waa qallafsanaantana ereyada ayaa ah kuwa ugu jecel rikoodhada loogu talagalay carruurta. Hase yeeshee, caruurtu marar dhif ah ayey ku baranayaan dhammaan sheekooyinka asal ahaan loogu talagalay heesaha, maadaama qaar ka mid ah ay ahaayeen kuwo aad u cakiran oo cunsuriyad ah oo qoto dheer.
Xidhiidhka u dhexeeya Muusikada Muusikada iyo Tareenada Mareykanka
Way adag tahay in la qiyaaso muusikada dadweynaha, tareenada, iyo waddooyinka tareenka ee waddankan aan lahayn.
Dad badan oo caan ah - caan iyo caan ahba lama yaqaan - waxay ka sameeyeen wadankooda tareenka. Tan waxaa ka mid ah magacyada waaweyn sida Woody Guthrie , Utah Phillips , iyo Bob Dylan .
Hase yeeshee, qaar ka mid ah heesaha ugu quruxda badan ee dadwaynaha ah ee Maraykanku waxay mar walba dib ugu soo noqon karaan dhismaha tareenada, gaadiidka tareenka, iyo, dabeecad ahaan, fuulaya digaagga xilliga Diiqada. Waxay ahayd wakhtigaas oo ay ka shaqeynayeen ragga iyo dadka ajnebiga ah (iyo, sida ku xusan, dadka naafada ah) waxay ku safreen tareenada raadinta shaqada.
Waxaad ogaan kartaa in waddankeena tareenada ee asal ahaan loo dhisay African-Americans iyo muhaajiriinta (gaar ahaan Irish soo galootiga). Waxay ahayd shaqo culus oo shaki kuma jirin in lagu sii dulqaadan karo joogitaanka muusikada. Waxay ka caawisay inay kor u qaaddo shaqsiyaadka 'jacaylka' ee la midka ah wicitaanada goobta iyo heesaha afrikaanka ah ee Afrikaanka ah ayaa ka soo baxa dhaqanka addoonta.
Marka la eego " Waxaan ka shaqeynayay jidka tareenka ," khadka xadhiggu waa "... dhamaan maalinta oo dhan." Raggaani waxay si dhab ah u sameeyeen shaqooyin dib-u-dhac ah oo si fiican u socdey saacadaha shaqada hadda la aqbalayo bulshadeena.
Sheekada dhabta ah ee " Song Levee "?
Sidoo kale loo yaqaan " Song Levee, " buuggan muusiga ah ee heesaha ayaa leh taariikh qallafsan oo laga yaabo inaysan lahayn wax badan oo la xidhiidha ciqaabta. Waxa la daabacay laba jeer oo 1894-kii, laakiin 'Diinah' ayaa lagu qori karaa kahor 1850-kii.
Waxaa sidoo kale jira xiriir la leh Jaamacadda Princeton.
Waxaa laga fekeray qaar ka mid ah " Waxaan Ka Shaqeynayay Tareenka " waxaan ognahay in maanta loo sameeyay wax soo saar maskaxeed ee dugsiga. Taas waxaa la mid ah, waxaa jira calaamado muujinaya in gabaygu yahay mashiin ka kooban sadax muwaadin oo kala duwan.
Naqshaddan ugu dambeeya waxay sharraxaysaa sababta aayada gabayadu u ma wadaagaan. Tusaale ahaan, sheekadu waxay ka socdaan qulqulaha "Diinah, geesahaaga u jilicsan" si aad u sarreeya "Qofka ku jira jikada Dinaah." Waa isbeddel ku-ool ah ee wax-soo-saarka marxaladda halkii laga soo bandhigi lahaa heeso dhaqameed.
Waxaa macquul ah in qeybta tareenka ee heesta ay dhab ahaantii heesayaashu u heesayeen inay dhisaan waddooyinka tareenada qaranka. Mar labaad, waa gebi ahaan suurto gal ah in dib loo qoro si loo xasuusto waqtiyadaas. Xitaa ereyga "nool-dheer" wuxuu keenaa su'aalo sida asalka uu asalkiisu yahay hadana wax yar oo ka badan oo ka mid ah wadahadaladu maaha mid ka badan kuwa shaqeeyayaasha caadiga ah.
Diidmada ka hadlaysa qof ka mid ah "qolka jikada ee Dinah" ayaa sidoo kale ka dooday asalka. Xisaabaadka qaarkood waxay u dhigantaa ilaa 1830s London halka kuwo kalena 1844 oo Boston ah. Sheekada asalka ah waxaa lagu magacaabaa " Old Joe " ama " Qof kale oo ka tirsan aqalka Dina ."
Qaarkood waxay aaminsanyihiin in "Diinah" ay ku tilmaameyso cunto kariye jikada tareenka. Qaar kalena waxay aaminsan yihiin in ay noqdaan tixraac guud oo loogu talagalay haween Afrikaan ah oo Mareykan ah.
Qofka ayaa ku jira jikada oo leh Dinah
Qofka ku jira jikada, waan ogahay
Xaglaha oo ku yaal bangiga hore
Marka lagu daro aayadda asalka ah, waxaa sidoo kale jira hal qof oo ku saabsan qof jecel Dinaah in uu jiko.
Lama yareyn, " Old Joe " wuxuu ahaa hees la sameeyay oo muujinaya muujinta qarniyadii qarniga 19-aad . Qaar ka mid ah aayaadka ku jira bandhigyadaas waxay ahaayeen kuwo aad u muuqda mid cunsuriyadeed, laakiin tani waxay ahayd mid caadi ah oo lagu soo bandhigay qaabab badanaa oo lagu sawiray muuqaal cad oo madow.
Madonna - "Nolosha For Love"
Katy Perry - "Shaqada Gurmadka"
Maqaal-bari - Jumalten Aika Review
Dib u eegis: Iggy Azalea "Fancy" oo ka muuqda Charli XCX
James Durbin Songs - Mareykanka Idol Season 10
Maalinta Cagaarsho - "Iskuday Horraantii Sebtembar Dhamaadka" Music Video
Yaa Dumarka Duck iyo Maxay "Barbra Streisand?"
Monigone ee Monologue ee Classic Classic by Sophocles
Muuse - Bixiyaha Sharciga
Goob Joogista Goobta Dheeriga ah
Qodobka ugu xun ee Qodobka Adduunka
Xadgudubka Caqabadaha adag ee Isbaanish
Sidee loo qaabeeyaa Kulanka Koowaad ee Koowaad (-are) Falsafadda Talyaaniga
Ku saabsan Taliesin West, Architecture in Arizona
Sida loo xiro Kabahaaga ama Kayak-ga Roofka
Masiixiyiintu ma rumaysan karaan Dinosaurs?
Sidee buu Hatshepsut u dhintay?
Biography ee Linus Pauling
Dhalashada Olympians Gods iyo Goddesses
Dhagaxyada Goobta, Grylloblattodea Amar
Isticmaalka Xaaladda Degdega ah Marka la raaco 'Af' 'Qalabyo'
Muhiimadda Muhiimka ee Faransiiska
Hagaha Bilowga Faransiiska: Talooyin, Waxqabadyo iyo Ka Badan
Dhacdada Maskaxda ee Fikradda-Triassic
Qaybaha Hitch Trailer
Waqtiga Pink Floyd
5 Madaxweynayaasha Mareykanka ee Ciraaqiiyay Simpsons
Khariidadaha Wareegyada Xuduudaha ee Wadamada Maraykanka Common Caymiska - Weedho Woqooyi America
Juquraafi ah ee Windward iyo Leeward Islands
Xaflad Loogu Soo Dhoweynayo Bariga Obama
Doorka Muhiimka ah ee Qaybaha Saddexaad ee Maraykanka